यि नेताको चिन्ता: ‘बधाइ त खाइयो,मन्त्री पो खाइएला कि नखाइएला ? – YesKathmandu.com
हेर्नुहोस त मान्छेको तनाव र पीडा पनि कस्तो कस्तो ? प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बन्ने हल्ला चलाइएका अर्जुन नरसिंह केसी अचेल तनावमा छन । चैन र सुख अचेल गायव छ ।
कारण हो,सामाजिक सञ्जालबाट मात्र होइन ,कसैले भेटेरै त कसैले फोन सम्र्पक गरेरै फोन सम्र्पक गरेर काग्रेंस नेता अर्जुन नरसिंह केसीलाई बधाईको ओइरो लाग्यो ।पहिला गृहमन्त्री बन्ने हल्ला चल्यो । त्यही हल्लासँगै केसीलाई बधाईको ओइरो लाग्यो । आएका बधाई स्वीकार गरे पनि ।
तर जब आफू भन्दा जुनियर बिमलेन्द्र नीधिले उपप्रधान सहित गृह पड्काए,केसीको मन चिढिएन मात्रै उनी पार्टीले भागवण्डा लगाएको रक्षा मन्त्रालयमा लिएर सरकरमा जान अस्वीकार गरे ।
गृहमन्त्री नपाएको झोकमा सपथ ग्रहण अस्वीकार गरेका अर्जुननरसिंह केसीलाई रक्षा मन्त्री बनाइएको खबर बाहिरियो । यस पछाडि उनलाई बधाइको ओइरो आउन थाल्यो । भन्दै थिए, ‘बधाइ दोहोराएर खाइसके । मन्त्री खाने हो कि होइन थाहा छैन ।’
सशांक कोइरालाको स्वास्थ्यका कारण शेखर कोइरालालाई परराष्टमन्त्री बनाइएको हल्ला चल्यो । तर, उनी नियुक्त भइसकेका थिएनन् । कार्यकर्ताको फोन सहजै उठाउने शेखर भन्दैथिए, ‘पहिले हुन त दिनोस् । अझै केही भएकै छैन ।’
यद्यपि स्रोतका अनुसार,शेखरलाई परराष्ट्रमन्त्री बन्नका लागि वाधक उपेन्द्र यादव बनिरहेका छन । मधेशी गठबन्धनका नेता यादवको आँखा यही मन्त्रालयमा गढेर बसेको छ ।यही कारणले पनि शेखर परराष्ट्रमन्त्री बन्न सकिरहेका छैनन ।
मंगलबार माओवादीवृत्तबाट पाँच जना नयाँ मन्त्री छान्यो जसमध्य एक थिए कुनैसमय बाबुराम भट्टराईका निकट रहेका राम कार्की । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सपथ खाएकै दिन मन्त्री बन्ने पक्का भनिएका कार्की मंगलबार संचारमन्त्री नियुक्त भएको चर्चा चल्यो । उनलाई धेरैले बधाइ दिए । उनले स्विकारपनि गरे । अझैं पनि उनी शंकामै छन,किनकी नेपालको राजनीतिमा रातारात ‘यू टर्न’भएको धेरै राजनीति खेल कार्कीले देखेकाछन ।
६५ स्थानमा एमाले, ६२ मा कांग्रेस बिजयी, आधार इलाकामै माओवादी केन्द्र धरापमा
ट्वीटरमा पनि बाबुराम र लोकमानकै लोकप्रियता
मृदुला र गभर्नरको मिलेमतोमा सर्वसाधरणको घर कब्जा
भारतबाट फर्केलगतै परराष्ट्रमन्त्री महरा निकै गोप्य भ्रमणमा चीन जाने तयारीमा
प्रचण्डद्धारा सरकारी राहत पार्टीका नामबाट वितरण !
राप्रपामा को नम्वर १ अध्यक्ष ? पशुपति या कमल थापा
डिआइजीसहित दुई हजार चार सय प्रहरी कारबाहीमा
मेला भरेर फर्केको बस धादिङ दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु २८ घाइते
निर्वाचनका लागि सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको छ- महतो
बजेटबारे यस्तो छ नीजि क्षेत्रको प्रतिक्रिया
गौचन हत्याका मुख्य योजनाकार गुण्डानाइके बस्नेत पक्राउ
निर्वाचन आयोगको विरुद्धमा सर्वाेच्चमा रिट दायर, अब कस्ले टेक्ला घुँडा ?
देउवाका प्रियपात्र बिमल ढकाल संकटमा, विरासत जोगाउन मुस्किल
ओलीमाथी पथिकको गर्जन, जनार्दनको दारी र प्रचण्डको पुष्टी
रंगकर्मी सुनिल पोखरेलको स्वास्थ अवस्था चिन्तजनक, आइसियूमा भर्ना !